I-China EIR ekwi-Intanethi ye-SPC yoPhuculo loMgangatho woLungiso lohlobo loMvelisi kunye noMthengisi Igcinwe
Umzekelo No .: Inkcazo: SPCFL-C92 / 188, SPCFL-C110 / 220, SPCFL-P115 / 30, SPCFL-P135 / 30
* Olu luhlu lwe-SPC yomgangatho wokwenza imveliso luyilelwe ukwenza umgangatho we-SPC, owawubizwa ngokuba nguMgangatho wePlastiki wePlastiki.
Ukusebenza okuphezulu kwe-EIR kwi-Intanethi ye-SPC yokuSebenza
Kwimveliso yeplastiki, i-WPC flooring, i-SPC flooring, i-Soft PVC ye-LVT ukutyibilika ziindidi ezintathu eziphambili.
Okwangoku, umgangatho we-SPC ubonakalisa isibonelelo sayo esikhulu ngokuchasene nezinye izisombululo ezibini.
* I-SPC (ilitye lePlastiki lePlastiki) ngumgangatho wobuhlobo kwaye uveliswe yitekhnoloji ephezulu.
* Umxholo yelitye lekalika yendalo ngaphakathi undoqo eqinileyo kunye PVC nentlaka umgubo exutywe.
* Kukhutshwe ngabaqengqeleki aba-5, endaweni yeziqengqeleki ezi-4, umaleko wokunxiba onganyangekiyo, umbala wefilimu, ulaminishwe kwibhodi yesiseko somgangatho ngokufudumeza, ngaphandle kweglue kuyo yonke imveliso.
* Umgangatho oqinileyo we-SPC ophantsi kweRejista (i-EIR) yetekhnoloji yomphezulu
* Zero formaldehyde, Fire-Ubungqina, Water-Ubungqina, Sound-Ubungqina, Anti ukutyibilika, Anti-izinambuzane
* Cwaka Pad ngokuzikhethela
* Ukufakwa ngokukhawuleza nangokulula.
Umgangatho we-SPC ukwabizwa ngokuba yi-Rigid core luxury vinyl flooring, lolona khetho lukhuselekileyo lwe-vinyl olungenamanzi kwimarike.
Inokwakhiwa okufanayo ne-WPC, kodwa iza ne-ultra-ezinzima, apho igama elithi "isiseko esiqinileyo" livela khona.
Imele isibini samagama asetyenziswa ngokungafaniyo: ilitye leplastikhi yelitye okanye ilitye lokudibanisa ilitye.
ibhekisa kukwenziwa kombindi, kwaye isiseko se-SPC yeyona nto yenza lo mgangatho ukuba uhlale ixesha elide ngokungagungqiyo, ugcine ifom yawo nangaphezulu komgangatho ongalinganiyo.
Ngokuzinza nokuzinza okugqwesileyo, ukutyibilika kwe-SPC akusombululi nje kuphela ingxaki yokufuma okanye ukufuma kwendalo, kodwa ikwasombulula ingxaki ye-formaldehyde yenye imveliso yemithi.
ungafaka i-SPC engqongqo yomgangatho we-vinyl flooring kulo naliphi na inqanaba, ngaphezulu kwayo nayiphi na into ekhoyo (enzima yomphezulu) kunye nalo naliphi na inani lezithuthi.
Kancinci efikelelekayo kune-WPC Ifikeleleka ngakumbi kunelitye lokwenyani okanye ukhuni, kodwa ibiza kancinci kune-SPC
Ixinene kwaye iqinile, akukho mntu unikezelayo
Isiseko se-SPC siyabanda ngokulula Ukuxinana kancinci, ukuzinza phantsi kweenyawo,
Isiseko seWPC sigcina ubushushu
Amagumbi angaphantsi, izindlu zangasese, iikhitshi, iindawo zorhwebo Amagumbi angaphantsi, igumbi lokuhlambela, amakhitshi, onke amanqanaba ekhaya
100% engundoqo manzi
Ukungena kwamanzi ngaphezulu nangaphantsi 100% engundoqo manzi
Amanzi angaphezulu nangaphantsi
Kulula ukuyifaka ngokwakho
Inkqubo yokungenelela yolwimi kunye nomjelo Kulula ukuyifaka ngokwakho
Inkqubo yokungenelela yolwimi kunye nomjelo
Amanyathelo amaninzi kwinto enye, umgca wemveliso yokutyibilika kwe-SPC / umgca we-extrusion umgca / umgca wemveliso ye-vinyl.
Ukwamkela indawo ehambelanayo yokuhombisa kunye neetekhnoloji yokucinezela ukwenza umphezulu womgangatho oguqulweyo utshintshe kwaye utshintsho lombala lunokuhambelana nengqolowa yendalo yomthi enokwenza ubungakanani besithathu bokomgangatho buphucuke ngokucacileyo.
Ubungakanani bemveliso yokugqibela: 980 ukuya kuthi ga kwi-1250mm, ubukhulu be-1-10mm
Izinto zokwenza imveliso: CaCo3 / PVC nentlaka / ongeziweyo
Umphezulu: naluphi na uhlobo lwenkozo yemithi yomthi ejongeka njengomphezulu wokukhetha.
Umzekelo No. Amandla oMbane (KW) Izinto ezifanelekileyo Product ubukhulu (mm) Ububanzi beMveliso (mm) Ingeniso yemveliso (itoni / 24hrs)
I-SPCFL-C92 / 188 110 PVC + CaCO3 1-10 980-1250 15-18
I-SPCFL-C110 / 220 200 PVC + CaCO3 1-10 980-1250 25-30
I-SPCFL-P115 / 30 90 PVC + CaCO3 1-10 980-1250 20-25
I-SPCFL-P135 / 30 132 PVC + CaCO3 1-10 980-1250 35-40
Umgangatho weMveliso ye-SPC
Uluhlu Lokuqala Ukwaleka kwe-UV
Uluhlu lwesibini Nxiba lever enganyangekiyo
Uluhlu lwesithathu Umhombiso weLever
Uluhlu lwesine Isiseko esiqinileyo
Uluhlu lwesihlanu eqhotyoshelweyo underlayment (ubungqina besandi, ukhetho)
Ukusetyenziswa Machine Line
Umgca wokwenza kufanelekile kwi-vinyl flooring plank, ibhodi ye-SPC yokuthambisa, iphepha le-PVC, i-vinyl float engenawo manzi, i-interlock PVC floor.
iyunithi ephambili, i-extruder yeplastikhi, yenzelwe ukuba ifumaneke kwi-Concial Twin Screw plastic extruder okanye iParallel Twin Screw Plastic Extruder.
Umatshini we-Twin Screw Plastic Extruder ikwangowona mbombo uphambili wokuvelisa i-PVC PIPE, iprofayile ye-PVC njl.
Umgangatho we-SPC sesinye sezona zisombululo zibalaseleyo kwimveliso yomgangatho we-vinyl kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kwindawo yokuhlala, iofisi, ihotele, ibhanki, indawo yokutyela, ivenkile, ivenkile yesebe njl.
Egqithileyo Umgangatho weBhodi yePvd / WPC yeBhodi yeMveliso
Okulandelayo: I-SJSZ Series etsobhileyo Twin Screw Plastic extruder